Ukubaluleka nezimpawu zePolar Star | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma sibheka isibhakabhaka esigcwele izinkanyezi ebusuku singabona izinkanyezi. Kunezindlela lapho singabona khona izinkanyezi ezithile ezisebenza njengesijwayelo nomhlahlandlela wokumaka inkambo engaguquki futhi ingalahleki. Phambilini ezinye izinkanyezi nemilaza kwakusetshenziswa ukumaka imizila yasolwandle. Kulokhu sizokhuluma ngakho i-Pole Star. Itholakala eduze kwe-axis yokujikeleza komhlaba futhi ingeye-constellation Ursa Minor.
Ngabe ufuna ukwazi ukubaluleka kweNyakatho yeNkanyezi nokuthi ungayibona kanjani esibhakabhakeni? Funda ukuze ufunde ngakho.
1 Ukubaluleka kwe-Polar Star yamaMaya
2 Umlaza i-Ursa Minor neNyakatho yeNkanyezi
3 Ubudlelwano ne-constellation Ursa Major
4 Okusetshenziswayo nomlando
Ukubaluleka kwe-Polar Star yamaMaya
IPole Star ibithathwa njengohlobo oluthile lonkulunkulu ezinganekwaneni zamaMayan. Le mpucuko yamhlonipha futhi yamhlonipha ngokusebenziseka kwakhe. Kwakunabathengisi nabathengisi abaningi abasebenzisa le nkanyezi njengomhlahlandlela ukuze bakwazi ukubona inhloso yabo futhi bangalahleki. Kungabonakala kahle eYucatan futhi, ngenxa yalesi sizathu, bazizwa benakekelwa futhi begxile ohambweni lwabo olude.
Futhi inencazelo engokomfanekiso nengokomoya kumaMaya, ngoba yayifana namandla phezu kwendlela abantu okufanele bayilandele empilweni. Akugcinanga nje ngokusebenza njengomhlahlandlela wohambo lwezebhizinisi, kepha futhi kukhonze ukukhombisa indlela eya phambili empilweni.
AmaMeya amaningi abize le nkanyezi UNkulunkulu wobusuku noma uNkulunkulu wobusika. Ngaphandle kokucabanga kwakho, abakwaMayan babenolwazi olunzulu ngesayensi yezinkanyezi futhi babengagcini nje ngokuzihola ngezinkanyezi ezithile, kodwa futhi babekholwa futhi bazifunda izinkanyezi ezingaphezu kwesibhakabhaka. Babone izinkanyezi eziningi esingazibona namuhla. Le yindlela abakwazile ngayo ukugcina ukulingana okungokomoya okuphelele nendawo yonke.
Uphawu lwayo olungokomoya lumele ukufuna ukuba khona komuntu. Okunye ukusetshenziswa kwePole Star ukuthi kuyo ungathola zonke izimpendulo zemibuzo yempilo. Okunye ukungabaza okuvame kakhulu ngaleso sikhathi kwakuwukuthi iyiphi indima okwakufanele ayidlale ezweni elingaphansi. KumaMayan, iPole Star ibe nempendulo.
Umlaza i-Ursa Minor neNyakatho yeNkanyezi
Njengoba sishilo ngaphambili, iPole Star itholakala ngaphakathi kwenkanyezi i-Ursa Minor. Le yinkanyezi engabonakala kahle esibhakabhakeni sethu unyaka wonke. Singabona kuphela labo bantu abahlala enyakatho yezwe. I-Ursa Minor yakhiwa izinkanyezi eziyi-7 ezibandakanya iPolaris. Ingakhonjwa kalula njengesigebhuzi esiphuzi esibonakala ngokukhanya kakhulu futhi sidlula iLanga ngosayizi. Yize lokhu kungabonakali kuliciniso, kuyinkanyezi enkulu kuneLanga. Kodwa-ke, kukude kakhulu kunayo ngakho-ke, asikwazi ukukubona kusayizi ofanayo noma ukuvumela ukuthi kusikhanyise ngaleyo ndlela.
Ngaphambi kokusungulwa kwama-radar nezinhlelo zendawo, kanye ne-GPS, i-Pole Star yayisetshenziswa njengesiqondisi ekuzulazuleni. Lokhu kungenxa yokuthi kuthambekele endaweni yezulu yasezulwini.
Kuyinkanyezi okuthi, yize ezinye izinkanyezi zibonakala zihamba ngaphezu kwesibhakabhaka, akunjalo. Kulula ukuyibona ngoba ilungiswe ngokuphelele. Kuseduze nomlaza i-Ursa Major. Womabili la maqoqo ezinkanyezi ayafana ngoba akhiwe ngezinkanyezi eziyi-7 futhi akheke njengemoto.
Yaziwa ngokuthi i-constellation Ursa Minor ngoba izinkanyezi eziyibumbayo zikhanya kancane kunezase-Ursa Major. Lesi yisizathu esenza ukuthi wazi kancane ngokufunda ngezinkanyezi nokuthi ungawabona kanjani amaqoqo ezinkanyezi ukuze ukwazi ukuwubona usezulwini. Uma isibhakabhaka sicace bha futhi singenakho ukungcola okuncane, kulula ukusibona esibhakabhakeni.
Ubudlelwano ne-constellation Ursa Major
Ihlukile kwezinye izinkanyezi ngoba iyona ehlala imile esibhakabhakeni. Zonke ezinye izinkanyezi zingabonakala ukuthi zizungeze i-axis yokujikeleza komhlaba. Uhambo olwenziwe izinkanyezi luhlala amahora angama-24 njengamaplanethi neLanga. Ngakho-ke, uma sifuna ukwazi ukuthi i-Pole Star ikuphi ngesikhathi esithile, kufanele sibheke i-constellation Ursa Major.
Lokhu kwenziwa ngoba iyi-constellation elula ukuyibona kanti nePole Star isondele kuyo. Uma sifuna ukuyibona, kufanele nje sidwebe umugqa wokucabanga othatha njengendawo yokukhomba izinkanyezi ezimbili enkanyezini i-Ursa Major ebizwa ngeMerak neDhube. Lezi zinkanyezi ezimbili kulula ukuzibona esibhakabhakeni. Uma sezibonakele, kufanele sidwebe omunye umugqa wokucabanga ebangeni lamahlandla ama-5 ukuthi phakathi kwalaba bobabili ukuthola iPole Star.
Inkanyezi yePole nayo ibilokhu yaziwa ngokuthi i-North Star ngenxa yendawo etholakala kuyo kuphela eNyakatho Nenkabazwe. Elinye igama elaziwa ngalo yiPolaris. Kungenxa yokusondela kwayo eNyakatho Pole.
Kuwo wonke umlando, le nkanyezi isetshenziswe njengendawo yokukhomba ezinkulungwaneni zamatilosi awela ulwandle. Khumbula ukuthi yilabo kuphela abahamba ngomkhumbi badabula iNyakatho Nenkabazwe abayibonayo. Ngenxa yalesi sihlabani, esisebenze njengomhlahlandlela wabantu abaningi kangaka, bakwazi ukufinyelela ezikhundleni zamadolobha kahle.
Namuhla kusenjalo isebenza njengendlela yokulinganisa i-latitude ne-azimuth. I-azimuth yi-engeli esungulwe phakathi kwe-meridian futhi edlula endaweni ethile eplanethi yethu. Ngenxa yeNyakatho yeNkanyezi sikwazi ukuziqondisa ohlangothini olusenyakatho, yize kuzoncika ngokuphelele endaweni yombukeli. Ukukala okunokwethenjelwa yilokho okucatshangelwa ukuphakama lapho i-Pole Star iseduze.
Njengoba ukwazi ukubona, le nkanyezi inomlando omningi nokubaluleka, futhi nanamuhla iyathandwa kakhulu yizazi zezinkanyezi nakuma-hobbyists.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Inkanyezi Epholile
Inyanga eluhlaza okwesibhakabhaka
Lapho kuphuma khona ilanga